KOBCINTA CAGAARKA BUURAHA (CAADIGA AH) EE XAGAAGA XAGAAGA: HABBOONAANTA HABBOON IYO QAABABKA DARYEELKA - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyinka ugu sarreeya ee ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka maqaarka buurta
Ashiga buurta ah (casaanka) waa nooc ka mid ah ash buur, oo ka mid ah qoyska ee casaan, dhererka geedkan midhaha leh waa 5-12 mitir, caleemo barafsan oo cagaaran, oo ka kooban 7-15 waraaqo, koraan illaa 20 cm, llorescences cad cad ayaa ka bixisa ur aan fiicnayn, iyo casaan-casaan, miraha casiir ah, kobciya bilaha Agoosto-Sebtember, ka hor xilliga qaboobaha. Dawooyinka caanka ah ee loo yaqaan 'fridemy', 'vitamins', 'micro', carotene, acids organic), oo ah warshad qurxoon, oo aan loo adeegsanin xaaladaha koritaanka. Aynu ogaanno sida si habboon loo abaabulo beerta cagaaran buurta iyo daryeelka dacha.
Sida loo doorto geedo cagaaran oo caafimaad leh marka aad iibsaneysid
Doorashada safafka caleenta, si taxadar leh u fiiri xididada, waa inay noqdaan kuwo awood leh oo caafimaad qaba, leeyihiin 2-3 laamood oo waaweyn (ugu yaraan 25-30 cm dheer). Dusha sare ee xididada waa inay noqdaan kuwo cusub, qoyan. Iyada oo xididdada la caleemo iyo qallalan, xitaa haddii seedling qaadataa xidid, waxaa si tartiib ah u kori doonaa.
Miro, cherry, khudaar, qoryaha, yicibta, shadberry, loquat, boodhka, miro, strawberry iyo raspberry, iyo sidoo kale ash buur, ayaa ka tirsan qoyska pink.
Jilibka jilicsan ee jirridda iyo laamaha geedo waxay tilmaamayaan in ay hore u qodeen oo ay horeba u suurogaliyeen inay qalalaan. Haddii, ka dib markaad jilicsan tahay jilif yar, ma aragtid cagaar cagaaran, laakiin mid ka mid ah caleemaha, sida geedo yaryar ayaa horey u dhintey oo aan ku haboonayn beeritaanka. Gaadiidka, ku rid xididada seedling ee bac caag ah, ka dib markaad ku duudduubtay maro qoyan.
Ma taqaanaa? Magaca latin ee ash buurta waa aucuparia. Waxay ka kooban tahay labo erey: avis, oo tilmaamaysa shimbir, iyo jahawareer - si ay u qabsadaan, soo jiidato. Marka loo eego warshadda ayadoo ay ugu wacan tahay soo jiidashada midhihiisa shimbiraha, waxaa loo isticmaalay sidii hilib shimbir ah. Muuqaal Tani waa mid aad u faa'iido leh, sida shimbiraha ka caawiyaan ilaalinta miraha iyo berry beeraha aagga ka soo cayayaanka.
Beeraha saxda ah ee geedaha safan ee casaanka ah ee goobta
Waxaan ka hadli doonaa sidii loo abuuri lahaa roogga on site si ay u bixiyaan natiijooyinka ugu fiican.
Waa muhiim! Haddii aadan si dhakhso ah u geli karin geedo la iibsaday, ka dibna muddo yar (ilaa 3-4 toddobaad) iyaga oo ku riixaya meel cidlo ah leh. Under meeraha (xagga koonfureed), ka samee dalool daliil ah, dhig seedling ah oo ku jira iyo daboolo xididada iyo caleemaha kala bar dhererka dhulka. Libaax ku shub. Iyada oo dhirta xoog leh qalajiyey, iyaga biyo ku rid laba maalmood.
Xilliga ugu fiican ee soo degitaanka
Dad badan ayaa xiiseynaya su'aasha: goormaan abuuri karaa kabaha? Jawaabta ma aha mid toos ah. Xeebeedka waa suurogal in guga hore, laakiin kaliya ilaa May, sababtoo ah saplings u tagaan koritaanka hore iyo midho dambe. Sii wad sida ugu dhakhsaha badan dhulka ay u ogolaato.
Laakiin way ka fiican tahay inay dhacdo dayrta, dhowr toddobaad ka hor inta aan dhulka la dhigin. Xayawaanku waa diiran yahay oo aan weli la qaboojin, kaas oo ka caawin doona dhirta si ay u qabsadaan si dhakhso ah, waxay awoodi doonaan inay qaadaan xidid inta lagu jiro jiilaalka, ciidda ku wareegsan waxay ku degi doonaan si fiican oo dhumucaya, iyo guga waxay si firfircoon u koraan.
Haddii aad la yaaban tahay meesha ay ka wanaagsan tahay inaad ku beerato kabo, ka dibna fiiro gaar ah u yeelo meelaha ku yaal dhinaca geeska. Sidaas waxaad ku siin doontaa warshad leh aag aan xishood lahayn oo koritaan ah (tani waxay si wax ku ool ah u saameyn doontaa nolosheeda, maadaama ay tahay wax badan oo iftiiminaya), taajajiguna ma dabooli doono dhir kale. Ku habboon sida asalka quruxda badan ee cimriga dabiiciga ah. Daqsi, qoryo, geed, geedo gaajo leh ayaa loo tixgeliyaa shirkad ku habboon ash ashada. Waxa kale oo lagu daraa maple, barberry, honeysuckle.
Sida xulashada ciidda, kuwa ugu caansan ee ash buurta ayaa ku habboon, laakiin dhinaca dhexdhexaadka ah, waxsoosaarka dheecaanku wuxuu noqon doonaa mid ka sarreeya, iyo iftiin, bacaad ah, dhoobo boodh ah - hoose, korriidu way ka sii dartay. Ma jiri doonto jiritaanka meel u dhow biyaha dhulka. Ka hor inta aadan beerin buur ash, waxaa lagugula talinayaa inaad bixiso booska la doortay muddo laba sano ah beerista khudradda iyo firileyda.
Shaqada diyaarinta waxay ku bilaabantaa qorshaynta godadka fogaanta 3-6 mitir. Qoto dheer, width of mid kasta - celcelis ahaan 60 × 60 cm (tixgeliyaan size ee nidaamka xididka ee seedling). Ka dhig lakabka qubeyska hoose ee hoose (lebboor jabay, dhagax weyn oo la jajabiyey, dhoobo ballaariyey). Isku qasbo ciidda bacrin ah, compost peat ama humus (5 kg), superphosphate (150-200 g), bacriminta potash (100 g) iyo buuxi saddex meelood oo godadka beerta leh isku dar ah. Marka xigta, dhulka ku buuxi kala badh dabiicada caadiga ah isla markaana ku dar fara badan.
Diyaarinta geedo cows
Diyaarinta waa mid sahlan. Ka takhalus cudur, dillaac, xididdada la qalajiyey. Qaybtaas oo ka mid ah macaamilka iyo qaybta above ee geedo. Isticmaal mashiinka dhoobada ee xididdada si aad isaga ilaaliso qalajinta.
Waa muhiim! Haddii laga beerto geedi socodka guga, ka dibna xididdada ayaa hore loogu hayaa biyo muddo laba maalmood ah. Iyo geedo iibsanaya xilliga dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh looga saaro caleemaha iyada oo aan waxyeello burooyinkeeda, haddii ay dhacdo in goor dambe la iibsado, dhaji geed qoryo ah jiilaalka.
Habka loo beero geedo ash geedeedka
Sug ilaa inta biyaha lagu xannibo ciidda ka dib markaad waraabiso oo aad niyadjab ka sameyso bartamaha ceelka, ku rid seedling halkaa oo ku habboon nidaamka xididka. Ku dabool dhirta ciidda si ay u noqoto in ay noqoto 2-3 cm qoto dheer oo ka korodhsan xannaanada. Xaji carrada wax yar ka dibna ku shub si culus. Mulch carrada leh lakabka humus, peat ama waxyaabo kale oo organic (cawska, caws, caws engegan) 5-10 cm qaro weyn.
Noocyada daryeelka xilliyeed xilliga casaanka
Inkasta oo ash buur buurtu casaan - warshad qalafsan laakiin waxa kale oo uu leeyahay qaabab tiknoolajiyada beeraha ah.
Inta lagu jiro muddooyinka qalalan, ash buur waa in la waraabiyaa. Iyadoo la'aanta qoyaan, caleemaha iyo ugxan-yari way adkaan doontaa inay koraan. Mid ka mid ah dhirta ayaa ku filan laba ama saddex baaldiyo, laakiin tixgelin da'da geedaha iyo xaaladda carrada. Si ay ciidda ma qalajin, mulch iyada oo la isticmaalayo sida balka, peat, iwm. Ciidda agagaarka jir ee u baahan yahay jaridda joogto ah. Dhaqdhaqaaq aan fiicnayn, gacmo furan ayaa sidoo kale lagama maarmaan ah.
Sidee iyo waxa bacrimiya
Sannadka saddexaad ee nolosha, waxay bilaabaan inay quudiyaan ash buur. Ma jirto baahi loo qabo in la xiro bacriminta qoto dheer, kaliya qodo carrada yar. Guga, marka uu dhirta weli aan ubaxin, waxaa la bacrimiyay isku dar ah nitrogen, fosfooraska iyo bacriminta potash ee saamiga 20 g / 25 g / 15 g / m2, xagaaga roogga caadiga ah ayaa la quudinayaa isku isku dar ah, oo kaliya ee saamiga 15 g / 15 g / 10 g, iyo dayrta, marka goosashada la ururiyo, 10 g of fosfat iyo Bacriminta potash waxaa lagu dhaqmaa per m2. Kadibna waraabinta biyo badan ayaa lagama maarmaan ah.
Ma taqaanaa? Rowan wuxuu qayb ka ahaa caqiidada jaahilka ee Celts, Scandinavians iyo Slavs. Sida ay aaminsan yihiin, waxay haysatay awoodda suugaanta ah, ee laga ilaaliyo dhulka hoosteeda, oo laga ilaaliyo leexashada, waxay caawisay askarta. Caleemaha Rowan ayaa lagu riday kabaha dhalinyarada ee arooska. Iyo ilaalinta ka soo indha xun, iskutallaab ka samaysan yaryar cagaaran ayaa la sameeyey, taas oo loo xirxiray dhoobo cas oo dhar u dhajisa dharka.
Daweynta ash buurta cayayaanka iyo cudurrada
Warshad Tani aad u adkaysata cayayaanka iyo cudurada laakiin da'da dheer, iyo nolosha ash buuru waa 100 ama xitaa 150 sano, sanado dhowr ah ayaa saameeyn ku yeelan kara cayayaanka iyo cudurrada qaarkood.
Haddii aad rabto in buurta buurtaadu marwalba caafimaad qabto, baro siyaabaha loola dagaalamo cudurada iyo cayayaanka ashkuliga (casaanka).
Si aad ula dagaallanto buunshaha dhagaxa ah, burburinta qashinka iyo caleemaha dhacay, qodo ciidda ka hooseysa taajka geed dayrta xilliga qaboobaha, ku buufin xididada iyo dogobta geedaha leh cayayaanka todobaadkii kaddib markaad ubaxdo oo ku celi qalliinka 10-12 maalmood ka dib.
Caarada galleyda waxaa lagu la dagaalamaa koolo koole, kaas oo lagu daaweynayo qoryo leh caleenta iyo ilaa ubax. Caleemaha cayayaanka waa in la rakibo oo la gubaa.
Insecticides waxaa loo isticmaalaa in laga takhaluso tufaax cagaaran iyo aphids. Si aad u burburiso weelil casaan ah (hawthorn) weevil, buufin buurta buuraha leh cayayaanka ka hor ubax, ka saar / caleemo dhacday, qashin, iyo qodo qoto dheer ee dayrta.
Rooga ash buurta waxaa lagu baabi'inayaa iyadoo la jarayo laanta faafa iyo 1% Bordeaux dareeraha, kaas oo lagu daaweynayo qoryo 2-3 jeer 20-kii ilaa 25-kii illaa dhammaadka May.
Sidoo kale waxaan isticmaalaa 1% Bordeaux dareeraha si loola dagaallamo dhibco caleen ah (kiiskan, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad soo ururiso, ka qaadato oo burburiso caleemihii hore) iyo monoliosis (waa inaad sidoo kale goosataan).
Ka horjeeda ugu fiican ee xagta oo budada ah ayaa noqon doona daaweynta inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya leh baaruud la jajabiyey leh lime iyo burburinta caleemo dhacday. Sida loogu talaalay anthracnose, kaliya iska saar miro soo gaadhay.
Tan iyo taajkii dhirta geedka waxaa ku jira qaab pyramidal ah, iyo laamoodyo leh qaabka xagal xuduudaha ah oo aan wax ku biirin, xijiga waa in la gooyaa si ay laamuhu ugu soo baxaan xagasha midig ama xagal hoose.
Geedka gooyay ka hor intaan laamuhu bararin guga hore. Marka la eego tijaabooyinka dhalinyarada, gaaban caleemaha bacda dibedda, ka saar xad-dhaaf oo sii kordhaya xagal ba'an. Iyada oo koror xoog leh ay tahay in dib loo soo nooleeyo manjooyin 2 ilaa 5 jir ah. Waa inaad sidoo kale si joogto ah uga takhalustaa caleemaha xididka.
Gubashada Rowan xilliga dayrta inta lagu jiro xilliga dhoobada waxaa loo sameeyaa khafiifinta iyadoo la yareeyo dhererka dhererka. Boogaha ka badan 1 cm daboolo beerta beerta.
Goorta la ururiyo iyo sida loo kaydiyo midhaha qoraxda buuraha
Cawska raashinka ayaa si buuxda u dillaacaya Sebtembar iyo Oktoobar. Muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo beergooyska. Doorashada labaad waa in la sugo dhaxantii ugu horeysay, marka midhaha ay noqoto macaan. Waa in laga saaro geedkii si wada jir ah cawska. Cunto la uruuriyay ayaa joogi kara waqti dheer. Si aad u ilaaliso ash buur, waxaad isticmaali kartaa fadhiisin, laakiin ha u ogolaanin barafka. Oo waxaad si fudud u dhigi kartaa miraha ash buurta leh lakabka 10-15 cm oo sidaas kaydsan ilaa guga heerkul ah 0-1 ° S.
Ma taqaanaa? Rowan waxaa loola jeedaa malab guga. Miraha waxaa loo isticmaalaa sida alaabta ceeriin ee caanaha, si loo soo saaro cabitaannada fudud, ee macmacaanka iyo khamriga, ilaalinta (sameynta nacnac, jelly, macaanka, macaanka, marmalade). Noocyada miro iyo miro ayaa laga sameeyaa miro la qalajiyey. Wood waxay ku habboon tahay alaabta, qurxinta, leexashada. Bark waxaa loo isticmaalaa sida alaabta ceeriin ah.
Rowan - Doorasho weyn oo loogu talagalay aagga banaankeeda. Ma aha oo kaliya sawir, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh. Adiguna waa inaad hubisaa in aad khibrad u leedahay.